हिमाल खबरपत्रिका | डाक्टरले पनि हेप्छन् सुदूरपश्चिमलाई
- प्रकाश सिंह/भागेश्वरी शाह खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
स्वास्थ्य सेवा दिने डाक्टरबाट पनि ठगिएको छ, सुदूरपश्चिम। कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पतालको कथा।
महाकाली अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएपछि बिरामी नभएर सामान्य वार्ड पनि खाली छन् ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. नरेन्द्रविक्रम गुरुङ ८ साउन २०६९ मा सरुवा भएर महाकाली अञ्चल अस्पताल, महेन्द्रनगर आए । दुई दिन ९ र १० साउनमा हाजिर गरेपछि काज सरुवा मिलाएर उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा पुगे । दरबन्दी महाकालीमै रह्यो, तर डा. गुरुङ पोखरामा बसेर काम गरे । दुई वर्ष पुगेपछि उनको क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामै सरुवा भयो ।
सुदूरपश्चिमको पनि सीमान्त जिल्ला कञ्चनपुरमा रहेको यो अस्पतालमा २०७२ सालमा तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सक सरुवा भएर आए । १३ फागुन २०७२ मा आएकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सलिना खड्काको २०७३ साउनमा प्रसूति गृह, काठमाडौंमा सरुवा भयो । सोही दिन आएका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अर्जुनप्रसाद डुम्रे प्रहरी सेवामा भर्ना भए भने बाल रोग विशेषज्ञ डा. सुसन भट्टराई २०७३ साउनमा कान्ति बाल अस्पताल फिर्ता भए । २६ चैत २०७२ मा मेडिकल अधिकृतका रूपमा सरुवा भएर आएका शल्यचिकित्सक डा. घनश्याम थापा २०७३ साउनदेखि काजमा बसे । २०७३ मंसीरमा उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, काठमाडौंमा सरुवा भयो । २०७४ वैशाखमा करार नियुक्तिमा आएका रेडियोलोजिष्ट डा. रितेश थापा एक महीना मात्र बसेर धनगढी गए ।
खोज्दै जाँदा सरुवा, काज र फिर्ताको यस्तो सूची निकै लामो बन्छ । शुरूमा सूचना दिन आनाकानी गरेको अस्पतालले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने हाम्रो तयारीपछि उपलब्ध गराएका सूचना केलाउँदा यसको साङ्गोपाङ्ग तस्वीर देखापर्‍यो । २०२४ सालमा स्वास्थ्य केन्द्र, २०४१ मा जिल्ला अस्पताल हुँदै २०४३ सालमा अञ्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको १०० शøयाको महाकाली अञ्चल अस्पतालले दरबन्दी अनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक कहिल्यै पाएको छैन । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “स्थापनाकालदेखि नै दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृत आएनन्, अहिले पनि अवस्था उही छ ।”
‘रेफर’ मा सीमित अस्पताल
अञ्चल अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया पनि हुँदैन भनेको सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, महाकाली अञ्चल अस्पतालको विशेषता नै यही छ । यहाँ जनरल सर्जरी, हाडजोर्नी र प्रसूति सेवाका क्रममा हुने शल्यक्रिया पनि हुँदैन । अस्पतालका सूचना अधिकारी केशवदत्त जोशी यसको प्रमुख कारण जनशक्ति अभाव भएको बताउँछन् । २०७०/७१ सम्म सामान्य शल्यक्रिया हुँदै आए पनि अहिले सामान्य घाउको चिरफार समेत हुन छाडेको जोशीले बताए ।
अस्पतालमा आकस्मिक प्रसूति सेवा मात्र सञ्चालनमा छ । बच्चा जन्माउन नसक्ने ‘क्रिटिकल’ अवस्थाका महिलाको मात्र शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिन्छ । यसबाहेक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अरू सबै ‘केस’ रेफर गरिन्छ । अस्पतालले लिखित रूपमा धनगढी, नेपालगञ्ज र काठमाडौं रेफर गर्ने भए पनि कर्मचारीले भारतका खटिमा, पिलिभितलगायत ठाउँका विभिन्न अस्पतालमा जान सल्लाह दिने हुँदा बिरामीहरू उतै जान्छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन छाडेकाले प्रयोगशाला समेत आक्कलझुक्कल मात्र सञ्चालन हुन्छ । ल्याब टेक्निसियन महेशराज जोशी भन्छन्, “ल्याबमा अहिले सामान्य चेकजाँच मात्र हुन्छ ।”
दरबन्दी भए पनि भिडियो एक्सरे (अल्ट्रासाउन्ड) गर्ने रेडियोलोजिष्ट छैनन् । निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट, स्त्रीरोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ डा. हरिकुमार श्रेष्ठ नै भिडियो एक्सरे पनि गर्छन् । “सधैं गर्न सकिन्न, अरू कोही नभएकाले सोमबार र बिहीबार मात्र अल्ट्रासाउण्ड गर्छु” डा. श्रेष्ठले भने, “गर्भवती महिलाको अल्ट्रासाउण्ड गर्नै पर्ने भएकाले सातामा दुई दिन यसका लागि छुट्याउँछु ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पदमराज पन्त सुदूरपश्चिमकै हुन् । त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालका निर्देशक रहिसकेका आँखा रोग विशेषज्ञ डा. खडकबहादुर खड्का, हाल कोशी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत रेडियोलोजिष्ट (११औं तह) डा. यज्ञराज पाठक, केही समय गंगालाल हृदय केन्द्रमा काम गरेका र हाल नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. यादव भट्ट तथा एनेस्थेसिस्ट (११औं तह) डा. वीरेन्द्रबहादुर सिंह पनि सुदूरपश्चिममै जन्मे हुर्केर यो पदमा पुगेका हुन् ।
२०७४ माघमा महाकाली अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठमाथि दुव्र्यवहार भयो । कारण थियो– उपचारका क्रममा एक महिलाको मृत्यु हुनु । पाठेघरको शल्यक्रिया गरेकी ती महिला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको सात दिनपछि फेरि भर्ना भइन् । पुनः भर्ना भएको केही घण्टामै उनको मृत्यु भयो । “उनको हृदयघातबाट मृत्यु भएको थियो, तर आफन्तले अप्रेशन गरेकै कारण मृत्यु भएको भन्दै दुव्र्यवहार र हातपातको प्रयास गरे” डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसपछि अस्पतालमा बस्न सक्ने वातावरण थिएन, तैपनि जेनतेन अहिलेसम्म टिकेको छु ।”
२०६७ साउनमा शव पोस्टमोर्टमको विषयलाई लिएर स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. खगेन्द्र भट्टमाथि दुव्र्यवहार भयो । उनीविरुद्ध नारा जुलूस गरेर अस्पतालमा बस्न समेत नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएपछि सरकारले उनलाई सेती अञ्चल अस्पताल, धनगढी सरुवा गर्‍यो । डा. भट्टमाथिको दुव्र्यवहारले अरू धेरै डाक्टरलाई हतोत्साहित बनायो । अस्पतालका सूचना अधिकारी केशवदत्त अवस्थी त्यसबेलादेखि अस्पतालबारे नकारात्मक सन्देश फैलिन थालेको र डाक्टरहरू यहाँ आउन हच्किएको बताउँछन् ।